UNGQONGQOSHE wezeMpilo eGauteng uDkt Bandile Masuku uthi akulona iqiniso ukuthi lesi sifundazwe sesimbe amathuna ayisigidi ukulungiselela abazobulawa yiCovid-19 Isithombe: African News Agency (ANA)
Jonisayi Maromo | July 9, 2020
UMnyango wezeMpilo eGauteng uphika imibiko yokuthi sewumbe amathuna ayisigidi ngenhloso yokulungiselela isibalo esiphezulu sabantu abazobulawa yiCovid-19 kulesi sifundazwe.
“Isifundazwe asinawo amathuna ayisigidi asembiwe. Uma kukhulunywa ngesigidi, bekushiwo ukuthi ikhona indawo engakwazi ukuthi kumbiwe kuyona amathuna ayisigidi okuyindawo kaMasipala,"kusho okhulumeni uNgqongqoshe wezeMpilo uKwara Kekana.
UKekana uthe uNgqongqoshe wezeMpilo uDkt Bandile Masuke uke wavakashela ezinye zalezi zindawo eseTshwane ngoLwesithathu.
“Indawo yamathuna ayivakashele ikwazi ukuthatha amathuna awu-24,000. UMnyango wezeMpilo eGauteng uyaqhubeka ukwenza ngcono ingqalasizinda nokuqinisa ezempilo ukuze sikwazi ukubhekana kangcono nokubhebhetheka kweCovid-19,"usho kanje.
Uthe uyaqonda ukuthi isihloko esithinta ukufa sibucayi kakhulu, kodwa kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi kunendawo eyanele yokubhekana nemingcwabo eminingi uma kufika isikhathi.
"Ngebhadi leli yiqiniso esingeke sikwazi ukulibalekela".
UNGQONGQOSHE wezeMpilo eGauteng, uDkt Bandile Masuku Isithombe: Bhekikhaya Mabaso/African News Agency (ANA)
NgoLwesithathu uNgqongqoshe wezeMpilo kuleli, uDkt Zweli Mkhize utshele amalunga ePhalamende ukuthi isikhathi esikade sibikezelwa sokuqombola kwezibalo zabantu abakhungethwe yileli gciwane, sesifikile.
Uthe nokho izibhedlela zakuleli zizoshodelwa yimibhede emagumbini abaguli kakhulu nakulawo ajwayelekile.
Ubale iGauteng ne-Eastern Cape njengezifundazwe ezizoba senkingeni kakhulu kulamasonto ambalwa ezayo.
"Njengamanje sesifike kuleso sikhathi lapho obaba bethu, omama bethu, izihlobo zethu, abafowethu nodadewethu kuyibona asebehaqwe yileli gciwane,"usho kanje.
"Lolu bhubhane luhlasele umhlaba wonke, luzoshiya izibazi zangunaphakade. Luyasinyonyobela lweba izimpilo, lweba imisebenzi, lweba amabhizinisi. Alukhethi bala lamuntu, alikhethi bulili futhi alukhethi nazinga lempilo,"kuchaza uMkhize.
UKekana ubuye wadalula nokuthi eGauteng Inhloko yoMnyango wezeMpilo uSolwazi Mkhululi Lukhele ungomunye wabasebenzi bezempilo osehaqekile.